Shorokeessummaa Afriikaa keessaaf sababaan maali?
Shoroorkeessummaa fi leellistummaan Afrikaa keessatti jajjabaachuun dudda duuba isaatii humnootii hedduu qaba jedhu Dhaabbata qorannaa waa’ee nageenyaa kan Pretoriyaa keessatti xiinxaltuu kan ta’an Jakkie Cilliers.
Garuu jedhu shoroorkeessummaa addunyaa irraa kan humna guddaan oofaa jiru eenyua akka ta’e falmisiisaa miti, Amerikaa dha jedhu.
Beekaas haa ta’u ituu hin beekiin har’a shoroorkeessummaa addunyaa irraa imaammataa fi tarkaanfii fudhataniin Amerikaan michoota ishee kan biyyoota gama dhiyaatu ofaaa jira. Keniyaa, Naayjeriyaa fi biyyoota hedduu keessatti deebii mootummaa fi dhaabbatootii nageenyaa qaban kennan rakkoo jiru daran hammeesse.
Garuu maddi baqatummaa fi tasgabii dhabiinsa Somaaliyaa, Siriyaa, Libiyaa, Iraaq fi Afgaanistaan keessatti ta’an. Biyyonni kun hundumtuu qiyyaafata giddu seensa Amerikaa keessa jiru. Kun immoo badiisa, jeeqama, nageenyii biyya keessaa gad adeemaa buluu fi godaansa guddaa uume.